Inqaku lomgca weVeto kunye Neyiphi na abaMongameli abakwaziyo ukwenza
AbaMongameli bafuna, kodwa iNkundla ePhakamileyo ithi 'Cha'
Umgca womgca yiyona nto ungayenza xa ithebhu yakho yokutya igijima kwi $ 20.00, kodwa unayo i-$ 15.00 kuphela. Esikhundleni sokongezwa kwetyala lakho lilonke ngokuhlawula ngekhadi lesikweletu, ubuyisela imali eyi-5.00 yezinto ongazifuni ngokwenene. I-line item veto - amandla okungazithengi izinto ezingenagunyaziwe - amandla aseburhulumenteni ase-US sele sele efuna kodwa sele ephikisiwe ixesha elide.
I-veto yomgca, ngamanye amaxesha ebizwa ngokuba yi-veto, i-veto eyayiza kunika uMongameli wase-United States igunya lokukhansela umbandela ngamnye okanye amalungiselelo-izinto ezihamba kumgca-kwiindleko, okanye "iimali ezibekelwe", ngaphandle vetoing yonke ibhajethi.
Njengengqungquthela yomongameli wezomongameli , i-veto ye-line-item mayingadlulelwa yiCongress.
Inqaku lomgca I-Veto Pros and Cons
Abaxhasi be-veto-line-veto baphikisana ukuba kuya kuvumela umongameli ukuba anqumle inkunkuma " yenkomo yengulube " okanye iindleko ezibonakalayo ezivela kwi- budget yemali.
Abaphikisanayo baxela ukuba kuya kuqhubela phambili ukunyusa amandla olawulo lolawulo lwegatsha likarhulumente ngokwexabiso lebebe lomthetho . Abaphikisana nabo baphikisana, kwaye iNkundla ePhakamileyo iyavuma, ukuba i-veto-line-item veto ayihambisani nomgaqo-siseko. Ukongeza, bathetha ukuba akuyi kunciphisa imali echithayo kwaye kunokukwenza kube nzima nakakhulu.
Imbali ye-Line-Item Veto
Cishe wonke umongameli ukususela u-Ulysses S. Grant uye wabuza iCongress for power-veto amandla. UMongameli uClinton wayenene, kodwa akazange alondoloze ixesha elide.
Ngo-Ephreli 9, 1996, owayengumongameli uBill Clinton wasayina uMthetho we-Veto Act ka - 1996 , owawunikwe iCongress by Senators uBob Dole (R-Kansas), kunye noJohn McCain (R-Arizona), ngenkxaso yamaDemokhrasi amaninzi.
Ngomhla ka-Agasti 11, 1997, uMongameli Clinton wasebenzisa i-veto ye-line-item for the first time to cut the three measures from the flow spending and bill bill. Kwimisitho yokutyikitya kweyilwayo, uClinton wachaza i-veto ekhethiweyo yokuphumelela indleko kunye nokunqoba ama-lobbyists kunye namaqela anomdla okhethekileyo.
"Kususela ngoku, abaongameli baya kukwazi ukuthi 'hayi' ukuchitha imali okanye ukungena kwerhafu, njengokuba bathi 'yebo' kumthetho obalulekileyo," kusho uMongameli uClinton.
Kodwa, "ukususela kwangoku" kungekudala. U-Clinton wasebenzisa i-veto-item item ephindwe kabini ngo-1997, ukusika umlinganiselo owodwa kuMthetho oHloniphekileyo woHlahlo lwabiwo-mali ka-1997 kunye nemigqaliselo emibini yoMthetho we-Relief Relief Act ka-1997. Ngokukhawuleza, amaqela axhatshazwa yizenzo, kuquka iSixeko saseNew York, inselele umyalelo we-veto umthetho enkundleni.
Ngo-Februwari 12, 1998, iNkundla yesithili sase-United States yeSithili sase-Columbia yathi i-1996 Item Veto Act ayihambisani nomgaqo-siseko, kwaye ulawulo lukaClinton lwabhenela isigqibo kwiNkundla ePhakamileyo.
Kwisigqibo se-6-3 esakhishwe ngomhla ka-Juni 25, 1998, iNkundla ePhakamileyo, kwimeko kaClinton v. Isixeko saseNew York sigxininise isigqibo seNkundla yeSithili, sichitha uMthetho we-Item Veto Act ka-1996 njengokuphula umthetho " "(Isiqendu I, iSahluko 7), somgaqo-siseko wase-US.
Ngethuba iNkundla Ephakamileyo yamthabatha amandla kuye, uMongameli uClinton uye wasebenzisa i-veto ye-line-item to cut 82 items from 11 spending bills. Nangona iCongress idilize i-38 ye-Vetoe ye-Clinton, i-Ofisi ye-Budget ye-Congressional iqikelele i-vetoes engama-44 eyamisa uhulumeni malunga ne-$ 2 billion.
Kutheni i-Line-Item Veto ingahambisani noMgaqo-siseko?
Umxholo woMgaqo-siseko Umhlathi okhankanywe yiNkundla ePhakamileyo uyichaza inkqubo ebalulekileyo yokwenza umthetho ngokumisela ukuba nayiphina ibhilidi, ngaphambi kokunikezelwa kumongameli ngesignesha yakhe, kufuneka ukuba idluliselwe yi- Senate kunye neNdlu .
Xa usebenzisa i-veto-line item to delete measures, umongameli empeleni ulungisa izibhili, amandla omthetho anikwe kuphela kwiCongress kuMgaqo-siseko.
Kwimbono yeninzi yenkundla, uJaji uJohn Paul Stevens wabhala: "akukho mqathango kuMgaqo-siseko ogunyazisa umongameli ukuba enze, aguqule okanye aphelise imimiselo."
Inkundla nayo ibanjwe ukuba umgca we-veto waphula imithetho " yokwahlukana kwamagunya " phakathi kwamagatsha omthetho, olawulo kunye namagqwetha olawulo karhulumente.
( Kwakhona ubone: Ilungelo eliLawulayo ngokuSekwa ​​koMandla eMandla )
Ngokombono ohambelana nawo, u-Justice Anthony M. Kennedy wabhala ukuba "iimpembelelo ezingenakuphikiswa" ze-line-item veto "zaphucula amandla kaMongameli ukuba avuze elinye iqela aze ajezise omnye, ukuba ancede omnye wabathengi berhafu aze awenze omnye omnye urhulumente kwaye uyamnyelisa omnye. "
UJohn F. Kennedy kaMongameli
UJames K. Polk - uMongameli we-Eleventh we-United States
Ngaba ngabaviwa abaMongameli kufuneka baKhuphe iRhafu yabo yokuRhumela?
Indlela yokuhlala ihlelwe kwiKholeji
Kuphi Ukufumana Iintlobo Ezikhethekileyo Zemizila kunye Nezimbiwa
Amagama aseLatini ngesiNgesi
Genotype kunye nePhenotype
IHindu Mahalaya Celebration: Ukumema uMamakazikazi
Ziyolise iiFilimu ze-Kids About the Patriotism yaseMerika
I-VIZ Media Publisher Profil
Umntu omdala 'Usuku Lwemvula'
Front Front of Animal Defenders - AbaLondolozi Bamalungelo Okulwanyana okanye ama-Ecoterrorists?
Ubomi Ubunjani Ngethuba KuPax Romana?
Iyintoni Isisombululo sangaphakathi?
I-Most-Performed School Musicals
Amacandelo e-Champions Pool - Ezi ziThuthi zoThotho
Icandelo leNdaba emfutshane ngokuBhala
Corrido: Imbali ye-Mexican Life kwiNgoma
Amagama Eemibala kwiItaliyane
Ufikelele ekupheleni kweFayile ngelixa udibanisa
Izihloko eziqhelekileyo ezi-10 kwiNcwadi
Izilwanyana Zolwandle Zilala Njani?